သင့်ဘဝ အတွက် အဖော်မွန်ကောင်း တစ်ယောက်ကို ဘယ်လိုရွေးချယ်ရမှာလဲ? – Sunthit Myanmar
သင့်ဘဝ အတွက် အဖော်မွန်ကောင်း တစ်ယောက်ကို ဘယ်လိုရွေးချယ်ရမှာလဲ?
ဘဝအတွက်ရွေးချယ်ရတော့မယ်ဆိုရင် မှားယွင်းရွေးချယ်မိခဲ့လို့ စိတ်ဆင်းရဲ သောကရောက်နေ ရတဲ့သူတွေ သင်တို့တွေ့ဖူးကြမှာပါ။ အခက်အခဲဘယ်လိုဖြစ်လိုဖြစ်လာ ဖြစ်လာ ကိုယ့်အပေါ် ယုံကြည်မှု နားလည်မှုတို့ပေးပြီး အတူတကွရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းနိုင်တဲ့ အဖော်မွန်ကောင်းတစ်ယောက် ရထားရင် ဘဝကြီးဟာ သာယာအေးချမ်းပြီး အရာရာပြည့်စုံသလိုခံစားရပြီး ပျော်စရာကောင်းနေမှာပါ။
ဒါဆိုရင် အဖော်မွန်ကောင်းတစ်ယောက်ရဖို့ ဘာလုပ်သင့်လဲ ဘယ်လိုမျိုးရွေးချယ်သင့်လဲဆိုတာကို သူငယ်ချင်းတို့ နည်းနည်းပါးပါးလေ့လာကြည့်ရအောင်လားဗျာ…
၁။ သူဟာတစ်ကယ်ပဲ ကိုယ်အပေါ်အမြဲကောင်းနေနိုင်လား။
မိမိဟာကိုယ့်လက်ရှိချစ်သူကို ဘဝလက်တွဲဖော်အဖြစ် ရည်ရွယ်လိုက်မယ်ဆိုရင် သူရဲ့အကြောင်းကို သေချာလေ့လာဖို့ လိုအပ်လာပါပြီ။ တစ်ချို့သောလူတွေက ချစ်သူရှေ့မှာမိမိရဲ့ပင်ကိုစရိုက်နဲ့ နောက်ကြောင်းကိုဖုံးကွယ်ထားတတ်သလို တစ်ချို့ကတော့ သူက ဘယ်လို အကျင့်ရှိတတ်တယ်ဘယ်နေရာတွေမှာ မကောင်းဘူး၊ သူကဘယ်သူဘယ်ဝါ ဘယ်လိုမျိုးဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုတာ မျိုး ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း ဖွင့်ဟပြောပြထားတတ်ကြ ပါတယ်။ ဒါဆိုရင်တော့ဘယ်လိုရွေးချယ်ရမလဲဆိုတာ သိလောက်ပြီပေါ့နော်။ သူ့ရဲ့မကောင်းတဲ့အကျင့်တွေကိုသင်က ပြင်ပေးနိုင်မှာပဲလို့မယုံကြည်လိုက်ပါနဲ့။
၈နာရီလောက်ကြာနိုင်မဲ့ခရီး တစ်ခုကို အစမ်းသဘောဖြင့် ကားမောင်းကြည့်ခိုင်းပါ။ ဒီလိုသာမာန်အခက်အခဲလေးကိုပဲ အေးအေးဆေးဆေး ကိုယ်အတွက်လုပ်ပေးနိုင်တဲ့ စိတ်ရှိလား စမ်းသပ်ကြည့်လိုက်ပါ။ သူ့ရဲ့စိတ်အခြေအနေကိုအဲ့လိုအခြေအနေမျိုးမှာလည်း စမ်းသပ်နိုင်ပါလိမ့်မယ်။
ကိုယ်က ဒီလောက်ချစ်တယ်ဆိုရင် ကိုယ်ထက်ပိုချစ်နိုင်တဲ့လူမျိုးကိုရှာပါ။ အဲ့ဒီချစ်သူရဲ့မိဘတွေကလည်းကိုယ့်အပေါ် သားသမီအရင်းအချာလိုမျိုး ဆက်ဆံပေးနိုင်မလားဆိုတာလည်းကြည့်ပါ။
၄။ သင်ကဆေးလိပ် အရက်သောက်တတ်ရင်တောင် တစ်ဖက်ချစ်သူက အဲဒီကိစ္စတွေမလုပ်တတ် သူဖြစ်ကြောင်းသေချာပါစေ။
သင်က ဆေးလိပ်အရက်သောက်တတ်နေရင်တောင် သင့်ချစ်သူက ဒါမျိုးတွေမလုပ်တတ်ဘူးဆိုရင် သင့်ကိုရပ်တန့်ဖို့သူကြိုးစာပါလိမ့်မယ်။ အဲ့လိုလူမျိုးရထားရင်သင်အတွက် သေတဲ့အထိ စိတ်ချမ်းသာရမှာပါ။
၅။ သင့်ရဲ့အခက်အခဲတွေကို ရင်ဖွင့်ပြောပြနိုင်ပြီး ခံစားမျှဝေပေးနိုင်တဲ့သူဖြစ်ပါစေ။
သင့်အတွက်အချိန်တွေကြာလာတာနဲ့အမျှ စိတ်ရင်းတွေကိုသိလာရမှာပါ။ သင့်ရဲ့အလုပ်အကိုင်အခက်အခဲနဲ့ ငွေကြေးအခက်အခဲ လူမှုရေးအခက်အခဲတွေကို သူ သို့မဟုတ်သူမရဲ့ ပခုံးပေါ်မှာ မှီထားပြီးအတူတကွမျှဝေခံစားနိုင်ရပါမယ်။
သင်က ကလေးလိုချင်ပါတယ် သူကမလိုချင်ဘူး မယူဘူးဆိုရင် အဲ့လိုလူမျိုးနဲ့ စီးပွားရေး မိသားစုရေးတွေမှာလည်း ညှိ့နှိုင်းလို့အဆင်ပြေမှာမဟုတ်ပါဘူး။ အဲ့လိုဆိုရင် အိမ်ထောင်သက်ကြာလာတာနဲ့အမျှ သဘောထားကွဲလွဲမှုတွေနဲ့ အိမ်ထောင်ရေးအဆင်ပြေနိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူး။
၇။သင်က သူ့အတွက် အချိန်မပေးနိုင်ဘူး အလည်အပတ်သွားဖို့ အဆင်မပြေဘူးဆိုရင် တောင်မှနားလည် ပေးနိုင်ပါစေ
အဲ့လိုမျိုးဆိုရင်နည်းနည်းလေး ဘဝကပျင်းစရာကောင်းနေမှာပါ။ ဒါပေမဲ့ အချိန်တော့ရလာမှာပါ။
၈။ လိင်ကိစ္စထက် လူမှုရေးရာတွေကိုပိုအလေးထားတဲ့သူဖြစ်ရပါမယ်။
သင်ဟာဆန္ဒပြင်းတဲ့သူတစ်ယောက်ဖြစ်နေရင်တောင် စားဝတ်နေရေးကပိုအရေးကြီးပါတယ်။ ဒါကြောင့်သူအချိန်နှင့်သူအခါ စီမံခန့်ခွဲထားပါလေ။
၉။ ရုတ်တရက်ကြီး လက်ထပ်ချင်နေတဲ့သူကိုဝေးဝေးရှောင်ပါ။
တစ်နှစ်တစ်လတောင်မစောင့်နိုင် ဒုက္ခကိုကြိုမမြင်ပဲ ရုတ်တရက်ကြီးလက်ထပ်ချင်ကြတဲ့ လက်မြန်တဲ့သူတွေရှိပါတယ်။ အဲ့လောက်ထိမမိုက်မဲပါနဲ့။ ခြောက်လလောက်စောင့်လိုက်ပါအုံး။
၁၀။ သင့်ကို ရယ်မောပျော်ရွှင်အောင်လုပ်နိုင်သူကိုရှာပါ။
သင့်ရဲ့ဘဝတစ်ကွေမှာ အခက်အခဲပြဿနာတွေကြောင့် ဝမ်းနည်းသောကတွေမရောက်ဘူးလို့မဆိုနိုင်ပါဘူး။ အဲ့လိုအချိန်မျိုးမှာ သင့်ကိုပြုံးရယ်အောင်လုပ်နိုင်တဲ့ သူဟာ အကောင်းဆုံးဆုံးသူပါပဲ။
Categorized as Lifestyle Tagged lifestyle, love, သင့္ဘဝ အတြက္ အေဖာ္မြန္ေကာင္း တစ္ေယာက္ကို ဘယ္လိုေ႐ြးခ်ယ္ရမွာလဲ?
အများပြည်သူတွေ အပူမီးတောက်နေချိန်အိန္ဒိယ ဝန်ကြီးဟောင်း တစ်ဦးက ဒေါ်လာ ၇၅ သန်းအကုန်ခံကာ သမီး မင်္ဂလာဆောင် ကျင်းပ